အမျိုးအစားမတူတဲ့ ထမင်းစား "တူ" များ - YOYARLAY Digital Media and News
အစားအသောက်စားတဲ့နေရာမှာ လက်နဲ့စားတဲ့ အလေ့အထ၊ ဇွန်း ခက်ရင်းနဲ့ စားတဲ့ အလေ့အထတွေ နည်းတူ ‘တူ’ ကိုအသုံးပြုပြီးစားတဲ့ အလေ့အထဟာ တရုတ်ပြည်မှာ စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၆၀၀၀ ကျော်လွန်သွားပါပြီ။
ယနေ့ခေတ်မှာ ဝါး၊ သစ်သားတို့နဲ့ ပြုလုပ်တဲ့ တူတွေသာမက သတ္တု၊ ပလက်စတစ် တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ တူများကိုပါ သုံးစွဲနေကြပါပြီ။ အသုံးပြုတဲ့ နိုင်ငံအလိုက် တူတွေဟာ ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုး ကွဲပြားခြားနားသွားကြပါတယ်။ ရိုးရာလေး ပရိတ်သတ်များ ဗဟုသုတရစေရန်အလို့ငှာ နိုင်ငံအလိုက် မတူညီတဲ့ တူပုံသဏ္ဍာန် (၃) မျိုးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဂျပန်လူမျိုးတွေ အများဆုံးအသုံးပြုကြတဲ့ တူတွေကတော့ အဖျားချွန်ပြီး သာမန်ထက် အနည်းငယ်တို တဲ့ တူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အစားအသောက်စားတဲ့နေရာမှာ ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ မိမိတစ်ကိုယ်စာ သီးသန့် ပန်းကန်ခွက်ယောက်တွေ သုံးစွဲတဲ့ အလေ့အထရှိတာကြောင့် တူတွေက သာမန်ဆိုဒ် ထက်အနည်းငယ်တိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်တွေက ငါးအစားများတာကြောင့် အဖျားချွန်တဲ့တူတွေဟာ အရိုးနွာရ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
တရုတ်လူမျိုးတွေဟာ အစားအသောက်စားတဲ့နေရာမှာ မိသားစုလိုက် ဝိုင်းဖွဲ့စားသောက် လေ့ရှိတာကြောင့် ခပ်ဝေးဝေးက ဟင်းပွဲတွေကို လှမ်းနှိုက်ဖို့ ထိပ်ဖျားဝိုင်းပြီး အနည်းငယ်ပိုရှည်တဲ့ တူတွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မိသားစုလိုက် ဟော့ပေါ့လို ဟင်းမျိုးကို ဝိုင်းဖွဲ့စားသောက်တဲ့ နေရာမှာ ရှည်လျားတဲ့ တူများကို အသုံးပြုတာကြောင့် အပူဒဏ်ကို သက်သာစေတဲ့ အားသာချက်လည်းရှိပါတယ်။
ကိုရီးယားလူမျိုးတွေဟာ သတ္တုနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ တူနဲ့ အစားအသောက်စားရင် အဆိပ်အတောက်ပြေစေတယ်လို့ အယုံအကြည်ရှိတာကြောင့် သတ္တုတူများကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ ရှေးဘုရင်တွေကတော့ ငွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ တူကို အသုံးပြူကြပြီး သာမန်လူတွေကတော့ ငွေအစားထိုး အခြားသတ္တုတွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ ကိုရီးယားတူတွေထဲမှာ အလုံးပုံသဏ္ဍန်မဟုတ်ဘဲ အပြားပုံသဏ္ဍန်တူတွေလဲရှိပါတယ်။ အလုံးထပ်စာရင် အပြားပုံတူက သတ္တုအကုန်အကျ ပိုနည်းတာကြောင့် ချွေတာတဲ့ အနေနဲ့ တူအပြားတွေ အသုံးပြုကြပါတယ်။
Mg_Kami ( ရိုးရာလေး)
Ref : Quartzy : Different Chopsticks explained
Previous Previous post: ခြေသည်းမှိုစွဲခြင်း မှ ကာကွယ်ခြင်း
Next Next post: အမေရိကန် ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၁၀၀ ကြွယ်ဝလာတဲ့ Amazon သူဌေး ဂျက်ဖ်ဘီဇော့
သွေးတိုးခြင်းကို လျော့ပါးစေမယ့် နည်းလမ်း (၆) ချက်
သင်သွေးတိုးခဏခဏစစ်ပါသလား ? သင့်သွေးတိုးက မြင့်လိုက်၊ ပုံမှန်ဖြစ်လိုက်၊ ကျလိုက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါသလား ? ဒါကသင့်မှာ သွေးတိုးအကြိုဖြစ်ဖူးတာကို ဆိုလိုတာပါ။ သွေးတိုးအကြိုနဲ့ သွေးတိုးနှစ်ခုလုံးက နှလုံးနဲ့ လေဖြတ်ခြင်းတို့အတွက် ဆိုးရွားတဲ့ရောဂါတွေပါ။ လူငယ်တွေမှာမဖြစ်ဘူးလို့မထင်ပါနဲ့။ ငယ်ရွယ်စဉ်တည်းက ဘဝကအလုပ်များပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေများခြင်းက သွေးတိုးဖြစ်ခြင်းကို…
Published: April 30, 20202:57 pm
Published: October 2, 20199:05 am Updated: 2:25 pm